MANDRITRA NY FIALAN-TSASATRA : Hosaziana izay fiara mampiakatra saran-dalana
Handray fepetra hentitra ny tompon’andraikitra voalohany eo anivon’ny fitaterana manoloana ny fanararaotana ataon’ireo fiara mpitatitra sasany amin’izao vanim-potoanan’ny fialan-tsasatra izao. 10 août 2017
Nanomboka ny faran’ny herinandro lasa teo no nankaty dia niakatra hatrany amin’ny 30% ny saran-dalana mihazo an’ireo toerana be mpandeha toa an’i Mahajanga sy Toamasina.
Manararaotra ny fahabetsahan’ireo mpiala sasatra misafidy an’ireto toerana ireto ny ankamaroan’ireo fiara mpitatitra ka mampiakatra ny saran-dalana amin’izao fotoana izao.
Nanambara ny tompon’andraikitra sy ny fikambanam-ben’ny Kaoperativa fa iharan’ny sazy izay fiara na kaoperativa mampiakatra ny saran-dalany izay miendrika ho fanararaotana. Anisany sazy mety ho azon’izy ireo amin’izany ny fampiatoana an’ilay fiara tsy hanohy ny diany avy hatrany.
Araka ny vaovao voaray anefa dia nilaza ny tompon’ireo fiara mpitatitra mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina fa tsy maintsy hampiakatra ny saran-dalana izy ireo manomboka amin’ny 16 aogositra ho avy izao.
Raha 15 000 Ariary izany teo aloha dia ho ampiakarina 20 000 Ariary.